Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir oo noqday xubin kamid Baarlamanka 11aad ee dalka. – XAMAR POST
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir oo noqday xubin kamid Baarlamanka 11aad ee dalka.
By Mohamed Abdi On Feb 14, 2022
Guddiga Doorashada Dowlad Goboleedka Galmudug oo qabtay Doorashada Kursiga nambarkiisu yahay HOP#138 ayaa shaciyay Natiijada Hordhaca ah ee kursigaasi, oo ay kuwada Tartamayeen 2 musharax oo is diiwaangeliyay kuwaa oo kala ah
1- Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha Xisbiga Wadajir.
2-iyo Naciimo Xuseen Cali
Gudigga Doorashada Galmudug ayaa sheegay in uu tartanka ka tanaasushat Naciimo Xuseen Cali iyadona ergadu hab gacan taag ah ay ugu codooyeen musharax Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame waxaana ogol ugu codeeyey 86 ergada ah oo ah dhamaan ergada ah.
Ugu danbeeyntii Guddiga ayaa sheegay in uu ku guuleystay doorashada kursi HOP#138 Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame oo helay 86 cod.
Doorshadda ayaa wali socoto waxaa laguda galay Doorshadda Kursiga Tirsigiisu yahay Hop#040, oo ay kuwada Tartamayaan 1- Cabdullaahi Aadan Kulane oo ah sargaal ka tirsan Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka, iyo
2- Xasan Cabdi Jaamac
Dad abaar darteed ugu geeriyooday Soomaliya
Shil Sababay Khasaaro Dhimasho iyo Dhawac leh oo ka dhacay Gabileey.